သနပ်ခါးကန်ပိန်းလုပ်မယ့် လူထုကို အားပေးရင်း ကိုဗစ်ကိုလည်းဂရုစိုက်ကြဖို့ သတိပေးစကားပြောလိုက်တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင် – Online News Post
သနပ်ခါးကန်ပိန်းလုပ်မယ့် လူထုကို အားပေးရင်း ကိုဗစ်ကိုလည်းဂရုစိုက်ကြဖို့ သတိပေးစကားပြောလိုက်တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်
By Cele MinPosted on February 25, 2021 February 25, 2021
မင်းသား တစ်ယောက် လည်းဖြစ် သလို အလှမောင် တစ်ယောက် လည်းဖြစ် တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင် က တော့ လက်ရှိ မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံ New York မြို့ မှာ နေထိုင်နေသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေနဲ့ အလှမ်းဝေး သွားခဲ့ ပေမယ့် ပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေးမှု ကို ရရှိ နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် … . ဥက္ကာမင်းမောင် က သူကိုယ်တိုင် လည်း ပြည်ပ ရောက် မြန်မာ လူမျိုး တွေနဲ့ အတူတူ ငြိမ်းချမ်း စွာ မြန်မာပြည် ကြီး အတွက် ငြိမ်းချမ်း စွာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် နေတာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည် သူလူထု အတွက် လည်း သတင်းတွေ မျိုးစုံ ကို မျှဝေပေး နေတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဒီကနေ့ မှာလည်း ဥက္ကာမင်းမောင် က သနပ်ခါး ကန်ပိန်း လုပ်ပြီး ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် တာ ကို သဘောကျ ပေမယ့် ကိုဗစ် ကိုလည်းမေ့ထားလို့ မရကြောင်း ပြောလာ တာကို တွေ့ရပါ တယ် … .
ဥက္ကာမင်းမောင် က “ သနပ်ခါး Campaign မလုပ်ပါ ဆိုတဲ့ Post မှာ ကျွန်တော့် ဖြည့်စွက်ချက် အောက် မှာ ကွင်းစကွင်း ပိတ်နဲ့ စတင် ကတည်းက ထည့် ထားပါတယ် … . သနပ်ခါး campaign idea ကို သဘောကျ ပါတယ် … . ဒါပေမဲ့ Covid လဲ မကူ းစေချင်ပါဘူး … Mask လဲ မချွတ် ပဲ သနပ်ခါး လိမ်းလို့ ရပါတယ် … original uploader ရဲ့ စာကို တော့ သူ တို့ point of view ကိုသဘောကျ လို့ ဘာမှမ ပြောင်းပဲ copy and paste လုပ်တင် တာပါ … အားလုံး ရဲ့ safety က လဲ အရေးကြီး ပါတယ် … မတရားစွာ ဖြင့် ဖမ်းချင် သလို ဖမ်းနေ ကြတာ လဲ အားလုံး အသိဆို တော့ mask မချွတ် တာ ဟာ အရာရာ အတွက် ကာကွယ်ပေး ထားသလိုပါပဲ … . မြန်မာ့ သနပ်ခါးလေးတွေ နဲ့ လှနေမယ့် ကျွန်တော် တို့ မြန်မာလေး များရဲ့ ပုံတွေ ကို မျှော်နေ မယ် … . အားလုံးဘေးကင်း ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်း ပေးနေပါ တယ် ” ဆိုပြီး သူ့ ရဲ့ အမြင် ကို ပြောလာ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … .
ဥက္ကာမင်းမောင် က တော့ သနပ်ခါး ကန်ပိန်း လုပ်ပြီး ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် တာ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ ကိုက်ညီ ပြီး ချစ်စရာ ကောင်း ပေမယ့် ကိုဗစ် ရောဂါ ကိုလည်း မေ့ထားလို့ မရတဲ့ အတွက် Mask ကို မချွတ် ဖို့ ပြောလာ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ် ကြီးအားလုံး သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင် ဆိုင်နိုင် ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက် ပါတယ် နော် … .
source : Okkar Min Maung ’s fb
crd : Cele Connections
မင္းသား တစ္ေယာက္ လည္းျဖစ္ သလို အလွေမာင္ တစ္ေယာက္ လည္းျဖစ္ တဲ့ ဥကၠာမင္းေမာင္ က ေတာ့ လက္ရွိ မွာ အေမရိကန္ နိုင္ငံ New York ၿမိဳ႕ မွာ ေနထိုင္ေနသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး အႏုပညာ အလုပ္ေတြနဲ႔ အလွမ္းေဝး သြားခဲ့ ေပမယ့္ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ အားေပးမႈ ကို ရရွိ ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္ … . ဥကၠာမင္းေမာင္ က သူကိုယ္တိုင္ လည္း ျပည္ပ ေရာက္ ျမန္မာ လူမ်ိဳး ေတြနဲ႔ အတူတူ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ျမန္မာျပည္ ႀကီး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ ေနတာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ သူလူထု အတြက္ လည္း သတင္းေတြ မ်ိဳးစုံ ကို မၽွေဝေပး ေနတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဒီကေန႔ မွာလည္း ဥကၠာမင္းေမာင္ က သနပ္ခါး ကန္ပိန္း လုပ္ၿပီး ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ တာ ကို သေဘာက် ေပမယ့္ ကိုဗစ္ ကိုလည္းေမ့ထားလို႔ မရေၾကာင္း ေျပာလာ တာကို ေတြ႕ရပါ တယ္ … .
ဥကၠာမင္းေမာင္ က “ သနပ္ခါး Campaign မလုပ္ပါ ဆိုတဲ့ Post မွာ ကၽြန္ေတာ့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ ေအာက္ မွာ ကြင္းစကြင္း ပိတ္နဲ႔ စတင္ ကတည္းက ထည့္ ထားပါတယ္ … . သနပ္ခါး campaign idea ကို သေဘာက် ပါတယ္ … . ဒါေပမဲ့ Covid လဲ မကူ းေစခ်င္ပါဘူး … Mask လဲ မခၽြတ္ ပဲ သနပ္ခါး လိမ္းလို႔ ရပါတယ္ … original uploader ရဲ့ စာကို ေတာ့ သူ တို႔ point of view ကိုသေဘာက် လို႔ ဘာမွမ ေျပာင္းပဲ copy and paste လုပ္တင္ တာပါ … အားလုံး ရဲ့ safety က လဲ အေရးႀကီး ပါတယ္ … မတရားစြာ ျဖင့္ ဖမ္းခ်င္ သလို ဖမ္းေန ၾကတာ လဲ အားလုံး အသိဆို ေတာ့ mask မခၽြတ္ တာ ဟာ အရာရာ အတြက္ ကာကြယ္ေပး ထားသလိုပါပဲ … . ျမန္မာ့ သနပ္ခါးေလးေတြ နဲ႔ လွေနမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ျမန္မာေလး မ်ားရဲ့ ပုံေတြ ကို ေမၽွာ္ေန မယ္ … . အားလုံးေဘးကင္း ၾကပါေစ လို႔ ဆုေတာင္း ေပးေနပါ တယ္ ” ဆိုၿပီး သူ႔ ရဲ့ အျမင္ ကို ေျပာလာ တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
ဥကၠာမင္းေမာင္ က ေတာ့ သနပ္ခါး ကန္ပိန္း လုပ္ၿပီး ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ တာ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ နဲ႔ ကိုက္ညီ ၿပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္း ေပမယ့္ ကိုဗစ္ ေရာဂါ ကိုလည္း ေမ့ထားလို႔ မရတဲ့ အတြက္ Mask ကို မခၽြတ္ ဖို႔ ေျပာလာ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ … ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ ႀကီးအားလုံး သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ေန႔ေလး တစ္ေန႔ကို ပိုင္ ဆိုင္နိုင္ ၾကပါေစ လို႔ ဆုေတာင္း ေပးလိုက္ ပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post ရင်ခုန်စရာ အတွင်းသားအလှလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန်းဆုဦးရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး
Next post ကိုယ်တိုင်တီးဝိုင်းမှာ ပါဝင်တီးမှုတ်ပြီး ပြည်သူလူထုကြီးကို စိတ်ခွန်အားပေးရင်း ရင်ထဲကဆန္ဒကို ထုတ်ဖေါ်လိုက်တဲ့ မင်းသားချော ထွန်းကိုကိုရဲ့ ဗီဒီယို